I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Jane And Pete
Jabulela i-vibe entsha nenemibala yalesi situdiyo esihlotshiswe ngokugcwele. Inendlu yokulala eyindlovukazi neyodwa kanye nekhishi elikhanyayo, indawo yokudlela, indawo yokuhlala enosofa olugoqiwe kanye ne-tv ye-freeview. Iyakwazi ukuzibamba futhi inomnyango wayo kodwa ixhunywe endlini enkulu lapho kuhlala khona ababungazi. Kukhona i-bbq negceke elingemuva elingasetshenziswa ngokuhlelwa kwangaphambili nababungazi.
IGreen Door Studio iwuhambo olula lwemizuzu emi-5 ukuya eTimaru CBD naseCaroline Bay lapho kunemisebenzi eminingi ngaphandle kolwandle. Lokhu kufaka phakathi i-volleyball yasogwini, i-basketball kanye nezindawo zethenisi, indawo yokubhukuda yokushwiba nge-skate kanye nephuli yojahidada.
4.97(95 okushiwo abanye)
4.97 · 95 okushiwo abanye
Jabulela indawo enokuthula nokuhamba okuningi ezindaweni eziseduze
Ibungazwe ngu-Jane And Pete
Siyatholakala ukuze sisize izivakashi uma kudingeka. Sihlala endaweni efanayo futhi singathintwa nge-txt noma nge-imeyili
UJane And Pete Ungumbungazi ovelele